Ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpuchi ikuku China Manufacturer
Nkọwa:Ikuku Na-ekpo ọkụ Ikuku Na-enweghị Ike,Insoles Ikuku Na-ekpo ọkụ,Okpukpo Okpukpo Akpata Agbanwe
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ngwa ngwa > Ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpuchi ikuku
Ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpuchi ikuku
Ndị a bụ ikpo ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-enweghị ọkụ. Mgbe ị nwetara otu n'ime mgbanaka eletrik ndị a, ị nwere ike iji ọtụtụ awa na ihu igwe oyi na-ekpo ọkụ. Ha na-eweta obi ụtọ ma na-adọrọ adọrọ, na-enye gị nkasi obi kasịnụ n'oge oyi oge oyi.
AJỤDỤ NDỊ NA-EME: E nwere ike ịkpụcha ihe ndị anyị ji kpụ ọkụ n'ọnụ dị ka ntụziaka ahụ si dị. Na-adịrị njikere ime mgbanwe gị.
EBE ECHICHE: Ihe ngwakọta nke ihe ọkụkụ + EVA insoles .
3 MGBE AHỤ ỤBỌDỤ NDỊ MGBE: Ngwá ọkụ anyị dị ọkụ nwere njedebe 3 nchịkwa nhọrọ nyere gị ọkwa nke okpukpu atọ.
Anyị dị 100% njikere na-adọrọ mmasị na-etolite na anyị ọ bụla ahịa ọnụ.
Na-agbanye Okpomkpa Okpomoku Kpọtụrụ ugbu a
7j lithium batrị adịchaghị mma uwe Kpọtụrụ ugbu a
Ọmarịcha ogwe ọkụ na-egbuke egbuke Kpọtụrụ ugbu a
Batrị Li-ion batrị na-agbanye ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Obere Waistcoat dị ọkụ nke infrared Kpọtụrụ ugbu a
3.7v Battery Rechargeable Height Gloves Kpọtụrụ ugbu a
Winter Jiri ejiji snow na-ekpo ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Okpukpo Ugwu Okpukpo Umu nke ndi mmadu nwere otu njikwa Kpọtụrụ ugbu a
Ikuku Na-ekpo ọkụ Ikuku Na-enweghị Ike Insoles Ikuku Na-ekpo ọkụ Okpukpo Okpukpo Akpata Agbanwe Ikuku Na-ekpo ọkụ Ikuku Mkpanaka na-ekpo ọkụ na-enweghị snow Aka Na-ekpo ọkụ na-enye Aka Igwe Okpomọkụ Na-ekpo ọkụ nke Na-achịkwa Ihe na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe